Karazam-barotra momba ny varotra ho an'ny vehivavy - akanjo, pataloha, jirobe, manga, skirt, sary, manikika, hairstyles, ho feno
Fivarotana ara-barotra - ny fitsipika momba ny famoronana ny sarin'ny birao miavaka
Ny fomba fiainana sy ny asan'ny fashionista maoderina dia mamela ny sary rehetra amin'ny sary manontolo. Noho izany, ny firaisana ara-drariny, ny ankamaroan'ny fotoan-dry zareo ao amin'ny birao sy ny fivoriana, dia misafidy ny fomba fiasa ara-barotra amin'ny akanjo, manantitrantitra ny maha-zava-dehibe azy, ny maha-zava-dehibe azy ary ny fahaiza-manaony.
Fangataham-barotra ho an'ny vehivavy 2018
Raha taona vitsy lasa izay dia nampifandraisina tamin'ny zavatra mampihetsi-po sy tsy misy dikany ny fomba fitafin'ny vehivavy ho an'ny vehivavy, androany dia niova tanteraka ny toe-draharaha. Stylists sy designers amin'ny fizaran-taona tsirairay dia manamboatra karazany maro karazana marevaka sy orkide mahazatra , pataloha, akanjo marevaka , akanjo hafa sy fitafiana hafa, izay afaka miseho ao amin'ny birao sy amin'ny fivoriana miaraka amin'ny mpiara-miasa. Ny fomba fandraisan'ny Business ho an'ny zazavavy dia mamorona sarimihetsika maoderina sy manintona, saingy tsy manelingelina ny fiheverana ny toetra mampiavaka ny tompony, izay tena manan-danja eo amin'ny sehatry ny fandraharahana.
Amin'ny 2018, ny endriky ny akanjo fitondra amin'ny sehatra mahazatra dia mifototra amin'ny fironana manaraka sy ny fironana ankehitriny:
Ireo blozy fotsy nalaina tamin'ity vanim-potoana ity dia voatery nesorina tamin'ireo singa manana endriny. Ao amin'ny orinasa izay manome fehezam-boninkazo henjana sy hentitra dia azo atao ny mametaka ny loko mainty, ohatra, ny kofehy manjelatra na ny palitao. Amin'ny toe-javatra hafa, ny kofehy tsy mahazatra, ny fingotra sy ny rambony, ny tsangambaton'ny loko mamirapiratra sy ny sisa dia azo avela;
afa-tsy ny pataloha misy zana-tsipìkany, ny fomba amam-panao lamaody amin'ny 2018 dia miaiky ny karazana tsy mahazatra toy ny pataloha, ny kapris na ny laconic jeans izay mipetaka amin'ny tendro kely;
Ny iray amin'ireo hitsiky ny vanim-potoana ho avy dia ny jirokely miaraka amin'ny fanisoana mifanohitra. Ireo singa ireo dia mety tsy mitovy amin'ny loko, fa koa amin'ny endrika na fitaovana famokarana;
Eo anivon'ny modely baolina, toy ny teo aloha, ny jiron'ny pensie dia manana ny toerana ambony. Amin'ity vanim-potoana ity dia afaka manana aloky ny lokony izy ireo ary ampiana amin'ny baskety na flounces;
Ny akanjo amin'ny sehatry ny fandraharahana dia mahazatra ao amin'ireo vehivavy lamaody izay maniry ny hitoetra ho vehivavy sy am-pitiavana hatrany. Amin'ny 2018, ny fanirian'izy ireo dia ho afa-po tanteraka - amin'ny fironana amin'ny akanjo marevaka - tranga misy ny lokon'ny lokony sy ny lokony trapezoïde, izay tsy manafina ny fihodinana ambaratonga sy ny fihodinan'ny silhouette.
Sary nalaina amin'ny fomba fandraharahana 2018
Ny fironana lamaody farany amin'ny 2018, fomba fandraharahana, dia mamela ny famoronana sary mahaliana sy niavaka ho an'ny asa sy ny hetsika ofisialy. Noho izany, amin'ny vanim-potoana ho avy, ny tovovavy tsirairay dia afaka mametraka mora foana ny lokony amin'ny loko tsy mahazatra, ohatra ny fuchsia na indigo. Ireo safidy ireo dia mahagaga ary manantitrantitra ny fahaizan'ny tompony hanandrana ny garderobe.
Mandritra izany fotoana izany, raha latsaka amin'ny vokatra mitovy ny safidin'ilay zazavavy dia tokony ho toy ny fandeferana sy laconic ny singa hafa amin'ny lamaody mody. Noho izany, amin'ity tranga ity, tokony haka ireo kiraro sokitra amin'ny alokaloky ny loko manerantany ianao eo amin'ny halaviran'ny halavany 5-7 santimetatra ary kitapo mena midina vita amin'ny hoditra tena izy amin'ny tononkalo kiraro. Eo ambanin'ilay akanjo dia manolo-tena ny manao akanjo fotsy tsy fotsy izay tsy mahasarika ny maso.
Rehefa mifidy akanjo maoderina mainty, mavokely na beige ianao, dia afaka mampivelatra ny sary miaraka amin'ny akanjo marevaka na akanjo marevaka. Izany ihany koa dia manao akanjo fitondra amin'ny akanjo - azo ampitaina amin'ny akanjo lava tena tsara na firavaka volo mahafinaritra. Ankoatr'izany dia mahaliana tokoa ny mijery ny famolavolana marina amin'izao vanim-potoana izao, izay ahafantarana ny haben'ny loko ny akanjo sy jirofo amin'ny fomba toy izany dia ny famolavolana tsikelikely, mandalo ny hazavana mankany amin'ny maizina.
Vehivavy fandraharahana vehivavy
Ity fironana eo amin'ny lamaody, amin'ny endriny ara-barotra, dia manitatra amin'ny sokajy maromaro, anisan'izany, ary ny akanjon'ny vehivavy. Izany dia midika fahavitrihana 2 - ny fifampiraharahana sy ny fitenenana amin'ny hetsika ofisialy, dia manome ny tsikombakomba henjana indrindra ho an'ny lohahevitra izay tsy mamela ny tena tsy manan-danja loatra, ary amin'ny asa tsotra ao amin'ny birao - ny akanjo sy ny fampifanarahana izay tsy maintsy hajaina. Ankoatra izany, ny fomba fandraharahana amin'ny 2018 ho an'ny vehivavy dia nampiditra singa fanampiny izay afaka mandà ny henjana sy ny ofisialy, ohatra, capri.
Ao amin'ny fiakanjoan'ny ankizivavy tsirairay izay maniry ny fomba fandraharahana, tokony hanatrika ireto lohahevitra manaraka ireto:
fitaka, telo na efatra. Ity farany dia ahitana vokatra efatra - akanjo, pataloha, akanjo sy akanjo izay azo ampifandraisina amin'ny fomba samihafa;
blouse. Miankina amin'ny fahasarotan'ny fepetra takiana, mety hanana endrika loko samihafa sy ny fampisehoana ny stylistic;
fitafiana vehivavy sy kanto;
kiraro - kiraro mihidy, tsy mihoatra ny 7-8 santimetatra avo;
Fitaovana mendri-kajy izay manampy amin'ny fananganana tsipìka.
Classic akanjo - fomba fandraharahana
Ireo singa ao am-pandriana dia miankina amin'ny fepetra manokana - ny akanjo ara-barotra ara-barotra dia tokony hiovaova manodidina ny lohalika, tsy mihoatra ny 5-10 santimeters avy ao aminy, ny lokon'izy ireo dia tokony hamehezana sy hikorontana, ny rambony dia tsy tokony ho maivana loatra na tsy mety. Ankoatr'izay, ny fomba fandraharahan'ny lamaody ara-barotra dia tsy manaiky ny fihenan-dàlana lalina sy ny faritra misokatra mihidy.
Ny fomba fandraharahana raharaham-barotra
Miasa sy mitsidika hetsika ofisialy, ny vehivavy tsara tarehy dia afaka misafidy ny akanjo, ny ampahany ambony dia jaky ary ny ampahany ambany dia akanjo, pataloha na akanjo. Ankoatra izany, ny stylista sy ny mpanakanto maoderina dia manolotra ny ankamantatra sy ny kitapom-batan'olona telo, izay ahitana karazan- tsakafo maro natao tamin'ny fomba iray.
Ny akanjo fitondran'ny vehivavy eo amin'ny sehatry ny fandraharahana no safidy mavesa-danja indrindra, izay voafidy matetika amin'ny mpiasa amin'ny hetra, banky ary fiantohana fiantohana. Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, mihevitra ny fomba fanao nentim-paharazana ny akanjom-bolo sy ny pataloha izy, ny fialan-tsasatra tsara sy ny rafitra misy ny silhouette. Mandritra izany fotoana izany, ny fiovan'ny toetr'andro maoderina dia mety ho ambany dia ambany sy fohy kely.
Ny akanjo misy skirt iray dia saika misy foana ny "pensilihazo", ary amin'ny akanjo iray "tranga" mahafinaritra. Amin'ny toe-javatra rehetra, ny singa ao anatin'ilay antoko dia afaka manana loko mitovy, ary hafa, ary amin'ny farany ny feon'ilay jakatra dia tokony ho maivana kokoa noho ny feon'ny faribolana. Ny lokon'ny fomban'ny vehivavy eo amin'ny sehatry ny fandraharahana dia nofidina amin'ny fanaraha-maso ny vanim-potoana amin'ny taona mifanaraka amin'ity fitsipika manaraka ity:
Amin'ny ririnina, ny firaiketam-po dia mifanentana amin'ny tonony maizina sy feno satry. Fanontana mety sy laconic - tranom-borona, sodina, tartana ary hafa;
Ao amin'ny lohataona dia manomboka mifoha ny natiora, vokatr'izany, ny loko vaovao dia nampiana ny loko manerantany manerana izao tontolo izao - crème-beige, minta mipetaka sy ny sisa;
Amin'ny alàlan'ny lamba firakotra amidy mandritra ny fahavaratra dia avela, ary koa ny lokon'ny sira sy ny lokony;
Farany, raha ny fahalavoana dia tonga ny aloka ny volom-borona sy ny alokaloka maro.
Rongony - fomba fandraharahana
Ny fomba fiasa ara-barotra dia tsy mamela ny fitomboany loatra, hany ka tsy tokony hanantona ny sain'ny hafa amin'ny akanjo manamboninahitra ny mpaninjara azy. Tsy azo ekena ary ny halavan'ny amboaram-bavahadin'ny vehivavy madinika dia afaka mihodinkodina eo anelanelany na eo ambany lohalika fotsiny eo amin'ny tananao. Raha ny karazany, dia tokony homena ny skirt-tulip na pensilihazo ny ankizivavy, ary vehivavy bevohoka dia afaka mandany vokatra.
Pants amin'ny fomba fandraharahana
Ny fomba ofisialy sy ara-barotra amin'ny akanjo dia mamaritra mazava tsara ny safidy ny pataloha ho an'ny vehivavy tsara tarehy. Tokony hanana fomba nentim-paharazana nentin-drazana izy ireo, hodi-jiro mivantana ary loko matevina. Ao amin'ny fomba fandraisam-peo mahazatra, misy fahafahana misimisy ihany - loko mahaliana, ambany kely mankany ambany, ny fisian'ny fanilo na poti-paty.
Vehivavy jaketa amin'ny fomba fandraharahana
Ny endriky ny vehivavy mpanao raharaham-barotra dia tsy azo eritreretina raha tsy misy jaky, satria ity foto-tsakafo ity ao amin'ny fikambanana sasany dia tsy maintsy atao na amin'ny andro mafana. Ao amin'ny fanangonana marika maoderina, azonao atao ny mahita karazany maro an'ity vokatra ity, ary ny ankamaroan'izy ireo dia mety tsara amin'ny fampitomboana ny sarin'ny vehivavy raharaham-barotra. Amin'ny ankapobeny, ny jacket dia mety ho marika na lamandy. Ny akora karana dia tsy avela afa-tsy amin'ny akanjo.
Blouses amin'ny fomba fandraharahana
Taona vitsy lasa izay, ireo vehivavy mpanao raharaham-barotra rehetra dia nitondra blozy fotsy nalaina tamin'ny fako nentim-paharazana. Ny fomba fandrafetana maoderina dia mamela ireo endrika sy fari-kafa hafa, na izany aza, ny lisitra dia voafetra be. Noho izany, ny vokatra ho an'ny birao sy ny fivoriana miaraka amin'ny mpiara-miasa dia tsy maintsy manaraka ireto fepetra manaraka ireto:
pahefana - fohy, lava na ¾;
ny halavany - eo afovoan 'ny feny;
ny fisiana kavina na ny tsy fisiany;
ny isa kely indrindra amin'ny singa fanainganana - ruches, flounces, folds, draperies. Raha manaraka fitsipika hentitra ianao, dia tsy misy izy ireo;
Fomba fanao ho an'ny vehivavy matavy
Ny vehivavy sy ny fomban-drazana dia tsy hiatrika ny olana amin'ny fisafidianana ireo fitaovana amidy ho an'ny birao, satria ny fomba amam-panao amin'ny akanjo ho an'ny vehivavy matavy dia samy hafa be. Noho izany, ny pataloha misy ny zana-tsipìka sy ny pensilihazo henjana dia manangana silhouette ary mahatonga azy ho tsara kokoa. Ny akanjo marefo eo an-tanan'ny lanja fanampiny dia tokony hifidy lanjany lava. Ankoatra izany, ny serivisy tsara dia afaka manompo Basque amin'ny ankapobeny na ny akanjo sy ny akanjo-penguin, vita amin'ny mainty sy fotsy.
Vehivavy ao amin'ny Business Business
Toy ny teo aloha, ny fomba fiasa ara-barotra amin'ny 2018 dia mametra tanteraka ny safidin'ny kiraro ho an'ny vehivavy mpandraharaha. Ao anatin'ity lamaody lamaody ity dia kiraro tsotra sy mihidy ihany no mahazo alalana, ary mandritra ny vanim-potoana mangatsiaka amin'ny taona - kiraro na kiraro, fa ao ambadiky ny birao. Tena tian'ilay kiraro vita amin'ny fitaovana voajanahary izany, manana loko marevaka matevina ary kofehy avo lenta, 5-7 santimetatra eo ho eo. Raha azo atao, dia mety hosoloina amin'ny kofehy ny voditongotra na manome safidy ho an'ny tokotany tokana , fa tsy amin'ny vehivavy kely amin'ny lamaody.
Fanoroana fantsika no asan'ny orinasa
Manicure, fomba fampivoarana 2018, tokony hijanona ho tony, voajanahary ary miverina. Tsy avela hamirapiratra ny loko marevaka amin'ny akorandriaka, stratony ary zavatra hafa mamirapiratra. Tokony homena ny loko tsirairay sy ny teknik-pahaizana manokana ny fitiavana. Noho izany, ny safidy tsara indrindra isaky ny andro dia fiakanjo frantsay matanjaka miaraka amin'ny tsipika fotsy. Ankoatr'izay dia tokony hajanona ny fananana vehivavy sy ny fantsika lava be loatra - mijery manamboninahitra sy tsy azo ekena ao anaty birao.
Fianarana amin'ny fomba fandraharahana
Ny haingon-tena mahafinaritra amin'ny fomba fampandehanana ara-barotra 2018 dia tsy tokony hamorona ny fiantraikan'ny zana-doko sy tsy fahamendrehana. Na dia vitsy aza ny mifikitra amin'ny tady dia mety hikorontana azy ireo amin'ny ankapobeny, amin'ny ankapobeny, ny volo lava dia tokony hikorontana sy hapetraka miaraka amin'ny menaka na volo . Ireo tompon-trano amin'ny volo maina na fohy dia tokony handravona styling tsara. Raha manaraka fitsipika hentitra ianao, dia tsy avela ho voasokajy ho anao ny fitongilanao, na inona na inona toe-javatra.
Karazana akanjo inona moa no ambony?
Ny zavakanto vatana amin'ny vehivavy - inona moa izany, ny tantaran'ny endrika ivelany, ny karazany, ny teknika
T-shirt amin'ny fomba ofisialy Rosiana
Mametraka kilaoty ao amin'ny vavony - fitsaboana
Marika an-dranomandry amin'ny fomba Georgiana
"Ilay mpanao heloka bevava tsara tarehy," Jeremy Meeks dia mihaona amin'ny mpirahalahy ao amin'ny ambaratongam-piaramanidina lamaody Chloe Green
Syndrome ny nenitoa
Sakafo mena miaraka amin'ny strawberries
Daisy Lowe dia lasa endrika vaovao momba ny akanjo triumph
Endrey mahasalama ny mahandro kobam-bary?
Tsangambato ho an'ny Mermaid Little
Iza no nanamboatra ny bisikileta?
Gedelix ho an'ny ankizy
Kitapo kafe - ho an'ny efitra fandraisam-bahiny
Tomaty "Balcony fahagagana"
Nosy Santa Cruz
Arthrose amin'ny tongotra - soritr'aretina sy fitsaboana
Raha tsara kokoa ny manapaka volo - torohevitra sy tricks